milina fanamafisana billet | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Fanamboarana fantson-tsakafo miaraka amin'ny induction Heating
24h Continous Billet Heating Afovoany miaraka amin'ny fampidiran-drivotra ho an'ny fanamafisana ireo barazy vita amin'ny varahina varahina / aluminio / vy mialoha ny famokarana mafana
Parameter de fandefasana afon-tsakafo:
Ao amin'ny foiben-afofandiavana fanesorana ny kitay na ny tsipika manontolo no hafanana. Amin'ny ankapobeny ho an'ny sombin-tsoroka na sombin-tsavoka fatoriana iray na biriky dia ampiasaina mba hanolotra azy ireo avy hatrany ny sora-baventy an-koditra mba hanefy ny sifodran-dalamby, sambo entona mivezivezy na amin'ny sasantsasany pneumatic pushers. Ny kitapo dia avy eo avy eo amin'ny bobongorona iray ao ambadiky ny iray amin'ny rindrina matevina na kofehy vita amin'ny kofehy ampiasaina amin'ny alalan'ny bobongolo izay mampihena ny fahasosorana sy misakana ny akanjo. Ny halavan'ny bobongolo dia singa iray amin'ny fotoana lava fitakiana, ny vanim-potoan'ny vanim-potoana isaky ny elanelana ary ny halavan'ny takelaka. Ao amin'ny tontolon'ny asa lehibe dia misy fizahantany midadasika tsy dia mahazatra loatra ny fantsona 4 na 5 amin'ny seranana mba hanomezana 5 m (16 ft) volan-koditra na mihoatra.
Sokajy Technologies Tags alofan'ny trano fandroana alimina, taratrafm, fitaovana fanamainana milina, fantson-afofandiovana, milina fanasan-drano, rafitra fanamafisam-peo, fanangonana varahina, fanangonana kitapo varahina, Induction Billet Heating Afo
Fiara fitaterana an-databatra boribory mitohy amin'ny induction
24h Continous Billet Heating Furnace amin'ny induction amin'ny varahina / varahina, aliminioma, vy vy-vy mialoha ny famokarana mafana, fanodinana, hot rolling and cutting, sns.
fampiharana:Billet Heating Furnace Mihatra indrindra amin'ny fanamafisana ny fitaovam-pako amin'ny metaly alohan'ny famokarana, fanodinkodinana, famokarana milina ary famokarana, ary fitaovana metaly mamono sy mafana, manasitrana, manasitrana ary fitsaboana hafanana hafa.
1. Mampiasa fanaraha-maso mandroso elektronika mandroso, amin'ny alàlan'ny herinaratra be loatra, be loatra ankehitriny, mametra ny tsindry, mametra ankehitriny, tsy fahampian'ny dingana, fihenan'ny herinaratra, tsindry anaty rano, famaritana mandeha ho azy ny fizotran'ny toetr'andro, fiarovana ny fanairana fanairana amin'ny hafanan'ny rano ary endrika fiarovana maro hafa. Fiasa mandeha ho azy mandeha ho azy. Manomboka amin'ny fiampangana mangatsiaka ka hatramin'ny fanariana mandritra ny tsingerina iray manontolo na inona na inona fomba fanovana ny lafaoro, tazomy ho azy ny herin'ny lafaoro, ka ny habetsaky ny metaly anidina ho an'ny kilowatt, ny fotoana fohy farany fampiakarana herinaratra, mampitombo toy izany ny tombom-bidin'ireo mpanamboatra, mitombo ny famokarana asa.
Ny laharana 2.kariana voatokana ny boaty anatiny sy ny faritra misimisy dia tototra tanteraka, arovy ny efitrano fitazomana madio sy mangatsiatsiaka. Tena manatsara ny fiainana andavanandro sy ny fahamendrehan'ny rafitra.
Ny fitaovam-pampandrosoana 3.High-power dia nalefa tamin'ireo mpamokatra fanta-daza iraisam-pirenena sy avy any an-toerana, ary mihazakazaka ao amin'ny 50% ny fahaiza-manao nomena, noho izany amin'ny 100% fikandrana fiarovana amin'ny sehatra, mampitombo ny fahamendrehana ny rafitra.
4.Ny fitaovana dia mampiasa varahina be rivotra, raha ampitahaina amin'ny varahina vita amin'ny rano, angovo bebe kokoa ho an'ny fanafanana, fampitomboana ny fahombiazany, tsy mila fikojakojana.
5.Power manomboka ny fampiasana ny zero aotra savony fanombohana, tsy misy fiantraikany, amin'ny fanjakana tsy misy-enta-mavesatra, mavesatra entana, mangatsiaka vy sy ny fanjakana hafa dia azo itokisana avy amin'ny mavitrika, azo antoka sy azo antoka, tsy misy olana mandritra ny fotoana maharitra ary manamora ny fikojakojana.
Fanamafisana ny hafanana:
1. Miantefa haingana, mampifanaraka ny hafanan'ny hafanana, mihenam-bidy ny fiakaran'ny otrik'aretina, mitovy amin'ny metaly.
2. Azo hafanaina mivantana avy amin'ny fitaovana mangatsiaka, mora soloina.
Fiatrehana hafanana, tsy latsaky ny fanimbana ny oksidana:
Amin'ny maha-fitsipiky ny fampiasana matetika induction heating Ny indostrian'ny elektromagnetika, ny hafanana vokatry ny asan'ny sela, noho izany dia manasatra haingana haingana ny fiasa, ny fiakaran'ny vokatra kely sy ny fiakaran'ny hafanana, ary ny fiverimberenan'ny fitiliana.
Maivana amin'ny automatisation, raha tsy misy ny fanodinana automatique:
Ny famatsian-tsakafo sy fanodikodinam-bola ataon'ny solosaina voafidy, miaraka amin'ny rindrambaiko fanokanana natolotry ny orinasa, dia tsy azo tanterahana raha tsy misy ny fandidiana.
Fanamafisana araka ny tokony ho izy, mari-pahaizana amin'ny kalitao avo lenta
Ny fanamainana mitovy, kely dia kely ny hafanan'ny hafanan'ny latabatra. Ny mari-pana dia azo fehezina amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana.
Simple Induction Heating fanolo amin'ny solika:
Araka ny haben'ny asan'ny fitaovam-piasana, mba ho ampy fitaovana manokana amin'ny induction induction induction. Ny lafarinina tsirairay dia natao amin'ny famolavolana haingam-pifamoivoizana haingana, mba hahatonga ny foitra ho mora, haingana ary mora alaina.
Fiarovana tanteraka tanteraka:
Ny fitaovana feno amin'ny rano fisotro madio, ny fanerena ny rano, ny ankehitriny, ny tebiteby, ny tsy fahampian'ny fiarovana fiatoana, ary ny faharetan'ny mari-pana. Noho izany fiarovana azo antoka izany rehefa fitaovana amin'ny fahadisoana, tsy misy fahasimbana ny singa.
Tsy lany ny herin'aratra, tsy misy loto:
Fahombiazana avo lenta, raha oharina amin'ny fomba fanafanana hafa, mampihena ny fanjifana angovo amin'ny fomba mahomby. Fitaovana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tontolo iainana, tsy misy loto. Ao amin'ny indostrian'ny fanaovana hosoka, ny fihenan'ny angovo rehefa mafana hatramin'ny 1250 ºC dia latsaky ny 390 kwh / t.
Sokajy Technologies Tags Aluminium takelaka fantsom-batana, alofan'ny trano fandroana alimina, taratrafm, fitaovana fanamainana milina, fantson-afofandiovana, milina fanasan-drano, rafitra fanamafisam-peo, Feno fantson-drivotra foana, fantsom-pofona afon-tsolika varahina, induction billet fanamainana